Football Khabar » आर्सनलको घरमा चेल्सीको रोमाञ्चक जित : ५ मिनेटमा उल्ट्यायो खेल !
आर्सनलको घरमा चेल्सीको रोमाञ्चक जित : ५ मिनेटमा उल्ट्यायो खेल !
इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सीले वर्ष २०१९ को अन्तिम खेलमा रोमाञ्चक जित निकालेको छ । आइतबार राति भएको लिगको २०औं खेलमा चेल्सीले आर्सनलमाथि उसकै घरेलु मैदानमा १–२ को रोमाञ्चक कमब्याक जित निकाल्यो ।
रोमाञ्चक भिडन्तमा भ्रमणकारी टोली चेल्सीले अन्तिम ५ मिनेटमा २ गोल गर्दै खेलको नतिजा उल्टाएको थियो । खेलमा अग्रता भने घरेलु टोली आर्सनलले १३औं मिनेमा अउबामेयाङको गोलबाट लिएको थियो । सोही गोलको अग्रता लिएर आर्सनल जितनजिक पुगेको थियो ।
तर, अन्तिम १० मिनेट घरेलु टोली सम्हालिन सकेन । चेल्सीलाई ८३औं मिनेटमा जर्जिन्होले गोल गरेर खेलमा फर्काए । मोउन्टले फ्रि किकमा हानेको बल सोझै बक्समा पोस्ट नजिकै झरेको थियो । तर, आर्सनलका गोलकिपर केही अघि बढेकाले उनले उफ्रिए पनि आकासे बल रोक्न सकेनन् । त्यसैबेला अगाडि बढिसकेका जर्जिन्होले खाली पोस्टमा चिप प्रहारमा सहजै गोल गरे । सो गोलमा आर्सनलका गोलकिपरको गल्ती थियो ।
सो गोल गरेको ५ मिनटमै चेल्सीले विजयी गोल हान्यो । ब्राजिलियन विलियनले मैदानको तल्लो भागबाट आर्सनलका डिफेन्डरलाई छलाएर बक्समा दिएको पासमा युवा फरवार्ड टमी अब्राहमले विपक्षी खेलाडीलाई चलाखीपूर्वक छलाउँदै हानेको भुइँ प्रहार आर्सनलका गोलकिपरको टाङमुनिबाट छिरेपछि खेल चेल्सीले १–२ ले जित्यो ।
अब यो जितपछि चेल्सीले २० खेलबाट कूल ३५ अंक जोडेको छ । चेल्सी चौथो स्थानमा यथावत छ । पराजित आर्सनल समान खेलपछि २४ अंकका साथ १२औं स्थानमा यथावत छ ।
प्रकाशित मिति १३ पुष २०७६, आईतवार २२:१५